ကိုငြိမ်းချမ်း | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Posts by KoNyeinChan	4
ပျော်ရွှင်စရာ ပီနန်း 2011 သင်္ကြန်မှာ
Comments By Postကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - TNAPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - padonmarအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - padonmar - garudaတွံတေးအလှူ.... - kyaw hteik - kaung kin pyarမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - Mလုလင် - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - Ma Ma - uncle gyiဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - phoe cho - phoe choကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - uncle gyi - KZအတ္တဆန် - uncle gyi - Ma Maရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - uncle gyi - KZမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - uncle gyi - KZယုံလား? - uncle gyi - KZပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - TNA - မောင် ပေ``ကျန်းမာရေးအတွက် အရက် နဲ့ အုန်းသီး(အုန်းရည်) အသုံးဝင်ပုံ´´ - KZ - TNAကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAသူ - ရွှေ ကြည် - KZနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Shwe Ei - Shwe Eiမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - အရီးခင်လတ် - KZဖိုင်နယ်ပွဲ မှာ ပိုင်ရှယ်ဆွဲ (၂၅၇၄) - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ ...... မဟာဆန်.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသားအတွက် အဟာရ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - Foreign Resident - parlayar 46မင်္ဂလာပါ - ဘဲဥ - jujumaEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities